Ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo soo jeediyay in lala xisaabtamo gudoomihiyii hore ee goballaka banadir – STAR FM SOMALIA
Ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo soo jeediyay in lala xisaabtamo gudoomihiyii hore ee goballaka banadir
Iyadoo maalin ka hor si rasmi ah xilkii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir looga qaado Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) xilkaasina si rasmi ah loogu magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka, wuxuu soo jeediyay in lala xisaabtamo Guddoomiyihii hore Muungaab.
Mukhtaar Nuur Abuukar, Ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo la hadlay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xisaabtan dhab ah lala sameeyo Muungaab.
Wuxuu sheegay Xafiiska Hanti dhowrka Qaranka in looga baahan yahay inay la xisaabtan ku sameeyaan Xafiiskii uu baneeyay Xasan Muungaab, maadaama sida uu sheegay Muungaab cabasho badan laga soo gudbiyay, ayna soo gudbiyeen inta ugu badan Bulshada reer Muqdisho.
Mukhtaar Nuur Abuukar, ayaa sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro qofka masuulka ah hadii xilka laga qaado in uusan iska tagin oo lagu sameeyo isla xisaabtan dhab ah iyo baaris ku aadan cabashada Bulshada ay ka qabto.
Ku Xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka, waxa uu si cad u sheegay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Muungaab in si aad ah ay uga cabanayeen Bulshada reer Muqdisho.
Arimaha ugu waaweyn ee Bulshada reer Muqdisho Muungaab ay ku dhaliileen ayaa ah Qaadista canshuur aanan sharci ku saleysnayn, maadaama Bulshada Canshuurta laga qaadayo aysan haysan ammaan buuxa, iyo adeegyadii looga baahnaa inay qabato Dowladda hoose, sida Nadaafada iyo isdhexgalka Bulshada.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa dhaliilo kala duwan kala kulmaayo Siyaasiyiinta iyo dadka reer Muqdisho.
Diyaarad yar oo ku soo dhacday duleedka degmada Afgooye
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Puntland Saciid Xasan Shire ayaa goor dhow kaga dhawaaqay magaalada Garowe inuu iska casilay xilkii uu hayay